वर्षेनी कटान हुने बक्रा नदि, १३ सय घर धुरी जोखिममा (फोटो फिचर) - Sainokhabar
होमपेज / फोटो फिचर / वर्षेनी कटान हुने बक्रा नदि, १३ सय घर धुरी जोखिममा (फोटो फिचर)
वर्षेनी कटान हुने बक्रा नदि, १३ सय घर धुरी जोखिममा (फोटो फिचर)
गोपाल काफ्ले पथरी/ मोरङ्को पथरीशनिश्चरे नगरपालीका ५ मा पर्ने सुन्दरी चौक जैनघट्टामा बक्रानदिले कटान सुरु गरेको छ । गत हप्ताबाट पर्दै रोकिदै गरेको अविरल बर्षाले बक्राहा नदि किनाराका बासिन्दाहरु त्रासित बनेका छन ।
गत राति देखि परेको अविरल बर्षाका कारण वडा नं. ५ को तटबन्धन उच्च जोखिममा परेको छ । बर्से्नि कटान हुँदै बस्ति डुबाउदै आएको नदिको दिर्घकालिन तटबन्धन नहुदा नदि छेउमा पर्ने पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, सुनबर्षी र रतुवामाई नगरपालिका बर्से्नि डुवान हुँदै आएको छ ।
कटान नियन्त्रणका लागि लगाईएको ३ वटा स्पर मध्ये बक्रानदिले २ वटा स्पर बगाएको छ । शनिवार रातिको बर्षाका कारण नदिले लगभग १५ मिटर कटान गरिसकेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।
तटबन्ध भत्किएमा पथरीशनिश्चरे वडा नं. ५ का १३ सय घर धुरी डुबानमा पर्ने र अन्य वडा समेत जोखिममा पर्ने छ। खोला समयमै नर्फर्काएमा पथरीशनिश्चरे ५ र ६ सुनर्बर्षी नगरपालिका २, उर्लाबारी नगरपालिका र रतुवामाईको केही वडा डुवानमा पर्ने छन । बक्राहा नदिले खोलाको दुबै पटिको बस्ति जोखिममा पारेको छ । नदिको बिचमा रहेको पथरीशनिशचरे वडा नं. ५ को मैलिबारीको ८०र८५ घर नदिको उच्च जोखिममा रहेको छ । जहाँ पुग्न बक्रानदि तर्नु पर्छ ।
हाल नदि नियन्त्रणका लागि पथरीशनिश्चरे नगरले प्रयास गरिरहेको छ । तटबन्धन भएको स्थानमा जनप्रतिनिधी, सुरक्षा निकाय पुगिसकेका छन भने स्थानियलाई सुरक्षीत राख्न र सुरक्षित रहन नगरले सुचना जाहेर गरेको छ ।